Kubadsameeyaha Liverpool Naby Keita Oo Laga Yaabo Inuu Ka Tago Anfield Xagaagan
HomeHoryaalka IngiriiskaKubadsameeyaha Liverpool Naby Keita oo laga yaabo inuu ka tago Anfield xagaagan
January 4, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Liverpool ayaa eegi doonta inay dirto ciyaaryahanka khadka dhexe Naby Keita hadii uusan soo bandhigin qaab ciyaareedkiisa marka uu ka soo kabsado dhaawaca, sida laga soo xigtay Gabriel Agbonlahor.
Isaga oo si gaar ah ula hadlaya Football Insider, weeraryahankii hore ee England iyo Aston Villa ayaa sheegay in 25 jirkaan uusan ka soo bixin wixii laga filayay tan iyo markii uu ka soo wareegay RB Leipzig.
Xiddiga reer Guinea ayaa dhaawac uga baxay Garoonka ka dib 53 daqiiqo kulankii ay Reds la ciyaartay Leicester City Axadii dhaawac muruqa ah.
Waxaa lagu wadaa inuu maro baaritaanno dheeri ah oo caafimaad waxaana la sugayaa inta uu laacibku maqnaan doono.
Tan iyo markii uu u wareegay Merseyside xagaagii 2018 lacag rikoor ah oo kooxda lagu sheegay 52.25 milyan, Naby wuxuu la dhibtoonayay dhaawacyo is xigxigay.